မေးမြန်းချက် Archives > Page6of7> မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် (page 6)
June 10, 2014 မေးမြန်းချက် 0
ပြည်တွင်းငြိမ်ချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ IMNA ရုံးချုပ်၌ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် နိုင်ဟံသာအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်-(အယ်ဒီတာ) IMNA-ပထမဆုံးသိချင်တာက ဗမာမဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြီး အစိုးရအဆက်ဆက်ကို တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာကြတာလဲ? နိုင်ဟံသာ– လွယ်လွယ်နဲ့ရှင်းရှင်း ဖြေရရင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံမှာ လူမျိုးရေးအရ တန်းတူအခွင့်အရေးမရှိလို့ဖြစ်တယ်။ အာဏာရအစိုးရအဆက်ဆက်ဟာ ဗမာစကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဗမားသမိုင်းတွေကိုပဲ ဦးစားပေးဖော်ဆောင်နေပြီး၊ အခြားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဘာသာစကား စာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့ သမိုင်းအမွေအနှစ်တွေကို အာဏာနဲ့ ပိတ်ပင်ဖျောက်ဖျက်နေလို့ဖြစ်တယ်။ ရေရှည်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပျောက်ကွယ်ပြီး ဗမာလူမျိုးဖြစ်သွားဖို့ကို လုပ်ဆောင်နေလို့ဖြစ်တယ်။ IMNA-တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးက ဒီလိုပဲမြင်နေကြသလား? နိုင်ဟံသာ– ဟုတ်တယ်။ ဒါကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးတို့က လက်နက်တော်လှန်နေကြတာဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ လူမျိုးအချို့လောက်ကပဲ အမြင်လွဲမှား …
January 20, 2013 မေးမြန်းချက် 0
တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ – မင်းမွေ – MM – အန်တီကို တိုင်းရင်းသားအရေးကိစ္စမေးချင်လို့ပါ။ ဒီလွှတ်တော်မှာ တိုင်းရင်းသားအရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက် ပြီး
April 27, 2011 မေးမြန်းချက် 0
(မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းချက်) ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်းကို ထိုးစစ်ဆင်နေသည့် အစိုးရသစ်က မွန်ပြည်သစ်ပါတီအပေါ် ထားရှိလာနိုင်မည့် သဘောထားနှင့် လက်ရှိ အစိုးရသစ်အပေါ် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ သဘောထားကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာကို လွတ်လပ်သော မွန်သတင်း အေဂျင်စီမှ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါသည်။
အပြစ်ရှာဖို့ လာရင် အလုပ် မဖြစ်နိုင်
April 6, 2011 မေးမြန်းချက် 0
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး ခန့်အပ်ဖို့ စီစဉ်နေရာတွင် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို အဓိက ကိုင်တွယ်မည်ဟု ယူဆနေကြသည်။ ဤအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမတ် ၁၆ နေရာ အနိုင်ရခဲ့သည့် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငွေသိန်းကို မိကျဲဂိုက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါသည်။ မေး။ ။ အမေရိကန်အစိုးရက အထူးကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်မယ့် အစီအစဉ်ကို ဘယ်လို နားလည်ပါသလဲ? ဖြေ။ ။ ဆွေးနွေးဖို့၊ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဖို့ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရာမှာ အဆင်ပြေပြေ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ လာရောက် အမြင်ချင်းဖလှယ်တာ လာရောက်ညှိနှိုင်းမယ် ဆိုရင် …
March 19, 2011 မေးမြန်းချက် 0
မိကျဲဂို-မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ဖူကူရှီးမားတွင် လှုပ်ခဲ့သည့် မြေငလျင်သည် ငလျင်ပြင်းအား ၉ မဂ္ဂနီကျု နီးပါးရှိပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၁၄၀ နှစ်အတွင်း အကြီးဆုံး လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် မြေငလျင်တခု ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဆူနာမီ ရေလှိုင်းကြီးများ ဖုံးလွှမ်းမှုဒဏ်ကိုလည်း ခံခဲ့ရသည်။ ယင်းနောက် ရက်ပိုင်းအတွင်း နျူကလီယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများ ပျက်စီးခဲ့သည့်အတွက် ဓါတ်ရောင်ခြည် ယိုစိမ့်မှုများနှင့် လူထုအကြား စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မွန်လူမျိုးတို့၏ အခြေအနေကို သိရှိရန်အတွက် မြေငလျင်လှုပ်သည့် ဖူကူးရှီးမားဒေသနှင့် ၁၅၀ မိုင် (၂၄၀ ကီလိုမီတာ) ဝေးသည့် တိုကျိုမြို့တော်တွင် နေထိုင်သည့် ပုညကာရီ မွန်အမျိုးသားများအဖွဲ့ (ဂျပန်) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ …
January 18, 2011 မေးမြန်းချက် Comments Off on ဒုတိယပင်လုံသာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါက တနိုင်ငံလုံးအတွက် အကျိုးရှိမည်ဟု မွန်ပြည်သစ်တီပြော
December 6, 2010 မေးမြန်းချက် 1
ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
November 17, 2010 မေးမြန်းချက် 0
မောင်ကို (နိုင်သဟ) ကျနော်တို့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို လက်ခံနိုင်မဲ့ကြောင်း မရှိပါ။ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်အာဏာရှင်သက် စိုးရှည်ပို့အတွက် သူတို့က ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ ဥပဒေပါ။ နောက်တစ်ခုက (၂၀၀၈) အဖွဲ့အစည်း ပုံအခြေခံဥပဒေက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဒီအဖွဲ့အစည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမ ဟုတ်ဘူး။ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးတစ်ခု ရင်ဆုံးဦးတည်ချက်လုပ်ဆောင်မှုမဟုတ်ပဲ စစ်အာဏာသက်စိုးရှည်ဖို့အတွက် လမ်းကြောင်းကို ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု လုပ်တာပဲဟု ကျနော် မြင်တယ်။
November 6, 2010 မေးမြန်းချက် 1